AUDIO: Wiilashii shaley Muqdisho isku qarxiyey oo la wareystey (Dhageyso) – SBC
AUDIO: Wiilashii shaley Muqdisho isku qarxiyey oo la wareystey (Dhageyso)
Laba wiil oo mid ka mid ah uu haystey dhalashada Mareykanka ee shaley isku qarxiyey magaalada Muqdisho gaar ahaan fariisin ay degan yihiin ciidamada AMISOM iyo kuwa dawlada KMG Soomaaliya ayaa wareysi lala yeeshay ka hor intii aanay is qarxin.
Wiilashan oo magacyadooda oo sadexan aanay soo gudbin xarakada Shabaabka ayaa waxaa kaliya ee saxaafada loo soo gudbiyey mid kasta magaca ugu horeeyo oo lagu daray magacyo Carabi waxaana ay kala yihiin Aadan Al-Ansaaro & Cabdisalaan Al-Muhaajir oo ah wiilka sheegtey in uu ka yimid dalka Mareykanka sanadkii 2009-kii.
Hadaba Idaacad ku hadasha afka Shabaabka ayaa soo bandhigtey wareysiga lala yeeshay labadaasi wiil, iyadoo sidoo kale la soo dhigay codka wareysiga wiilashan baraha Internet-ka.
Link-ga audio-ha hoose ka dhageyso wareysiga lala yeeshay wiilashan ka hor inta aanay isqarxin.HALKAN RIIX
war kuwan masaakiinta ah waa la khalday oo caqligoodii baa la bedeley. Haddii is-qarxintu wax fiican tahay maa Godane, Aweys iyo Ibraahim afqaan may is-qarxiyaan. Illaahay ka baqa oo caruurta ugubka ah naftooda ha halaaginina oo weliba taargadyada aan sharciga ahayn ee dadka masaakiinta ah lagu xasuuqayo ka daaya. Haddii aad cid is-qarxin faraysaan odayaashiina waxay dhali lahaayeen dhalay, ee gahayrey ha is-qarxiyeen.
abu maxamed says: